Sida Loogu Shaqeeyo 32-Bit Codsiyada 64-Bit Fedora | Laga soo bilaabo Linux
Sida Loogu Shaqeeyo 32-Bit Codsiyada 64-Bit Fedora
Waad salaaman tihiin asxaabta, markan waxaan jecelahay inaan idin tuso sida loo rakibo maktabad ay ku shaqeeyaan 32-bit barnaamijyada nidaamka 64-bit hadii aad isweydiineysaan maxay faa'iido ugu yeelan laheyd XAMPP Kaas oo na weydiinaya maktabad ku shaqeysa nidaamka 64 Bit. Hagaag, shaqo tag.
Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan gelino lambarradan soo socda Terminal-ka.
Ku qor eraygaaga sirta ah
para Debian Waxaan helay lambarradan.
Taasna diyaar ayey ku noqon laheyd wax walba. Nasiib!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida Loogu Shaqeeyo 32-Bit Codsiyada 64-Bit Fedora
sidoo kale dhab ahaan u maqan sidoo kale
sudo dpkg –add-dhisme i386
Kudar dhammaan 32-bit repo iyo voila, waxaad ku ordi kartaa codsi kasta oo 32-bit ah kernel 64-bit ah.
Codsiyada 32-bit ah lama noolaan karaan kuwa 64-bit ka ah, sidaa darteed iskudayada inaad rakibto mid ayaa kan kale kan kale ka saari doona [/ feejignaan]
Dambe ma aha wax dhibaato ah maxaa yeelay waxaan kaliya u isticmaali doonnaa koox gaar ah oo codsiyada ah sida darawallada winmodems oo kaliya u shaqeeya 32 qaybood, iwm. Xaaladdan oo kale, waa lagama maarmaan in la rakibo 32-bit madax madax ah oo la wadaagaya kuwa 64-bit.
Waxay i siineysaa maya. Dpkg wuxuu kaliya la jaan qaadayaa Debian iyo waxyaabaha soosaara.
Kahor intaanan iibin mootada oo aan khiyaanayn shaqaalaha, waxaan u baahanahay inaan inbadan is ogeysiino.
Haddii aad aqrin lahayd wax kale oo aan cinwaanka ahayn, waxaad arki lahayd inuu oranayo,
«Debian ahaan waxaan helay lambarradan.
sudo apt-get rakib ia32-libs »
Taas oo si sax ah u ah waxa BishopWolf loola jeedo xagga sare.
Isla waa in lagu dabaqo sheekadaada.
Waxaan u maleynayaa inaan ku qasbanahay inaan cadeeyo inaan isticmaalo Debian iyo faallooyinkeygii hore waxaa loogu talagalay Debian iyo isticmaalayaasha ka soo jeeda. Hagaag waxaan u maleynayaa inay horeyba uga jawaabeen tan
Xaaladdayda way ka fududahay, waxaan rakibaa nooca 32-bit oo yum ayaa si toos ah u xaliya ku tiirsanaanta (oo ay ku jiraan maktabadaha 32-bit)
Haa, laakiin, waxaad heli doontaa oo keliya nidaam x86 [32Bits], dhibicdu waxay noqonaysaa inaad yeelato saldhig x64 ah ka dibna aad maamusho barnaamijyo 32-bit ah. Waxaad haysan kartaa 32Bits laga yaabee inaad la socoto Kernel PAE si aad u hesho aqoonsi dheeraad ah HW haddii ay dhacdo inaad haysato kombuyuutar casri ah.
Guud ahaan, illaa inta aan ka fahmayo x64 waxay bixisaa karti ka weyn 32Bits oo ii sax haddii aan khaldanahay!
PS: MRGERSON, Waad ku mahadsantahay tilmaanta!
Sax, miyaad sii joogi doontaa F17 illaa ay ka dhammaystirayaan taageeridiisa ama aadan jeclayn nooca cusub, hadda F18?
Haa, waa awood weyn, suurtagal ah oo kaliya kuu adeegaysa haddii aad wax ka qabato xogta weyn (ciyaaraha, serverka, naqshadeynta garaafka iwm), haddii aad kaliya dooneyso inaad daalacato, sameyso shaqada barnaamijyada, ka soo dhejinta Linux, iwm, 32 waa kugu filan, adiguna Waxaad badbaadinaysaa in badan oo tamar ah taasina waxay saameyn ku yeelaneysaa inta daqiiqo ee batteriga ku jiro laptop-ka.
Qaabdhismeedka caqli gal ah Waan ogahay in muddada batteriga ay sidan ku xiran tahay tan iyo markii isticmaalka badan uu ka badan yahay culeyska PC-ga, laakiin, shaqsiyan waxaan u isticmaalay labada qaab dhismeed iyo shuruudaheyga shaqsiyeed batteriga wuxuu qaadanayaa waqti aad uga yar isticmaalka Windows, iyo Taas, Windows waxaan ku socdaa nalka hogaamiyaha oo si buuxda u ciyaaraya ciyaaraha qaar AEO II iyo kuwa kale waxaanan dareemayaa in batteriga uu sii dheeraanayo isticmaalka Linux.
Haa, guud ahaan waxaan u adeegsadaa linux ama labada nidaamba qeybta barnaamijka iyo kuwa kale ..
Dib u soo noqoshada kernel ee nolosha batteriga ayaa aad ugu badan Linux laakiin nasiib daro waxay u muuqataa inaan la siinin muhiimadda ay u leeyihiin. Waxaan xasuustaa in dib u dhacii ugu horreeyay ee xusid mudan lagu soo wariyay kernel 2.6.38 haddii aan si sax ah u xasuusto oo ay ahayd mid xaddidan oo aragti ahaan-ku jirta nooca 3.2! laakiin nooc kasta oo cusub waxaan ku ogaaday sida baterigeygu u sii yaraado. Xitaa dan kama lihi taas, maxaa yeelay waxaan badanaa u adeegsadaa imaatin kasta oo Masiixa. Kaliya ma ahan baytariga, sidoo kale waa wax caadi ah in la fiiriyo heerkulka sare ee processor-ka, diskiga iyo sawirada, oo leh raadadka ay ku yeelan karaan kombuyuutarradeena.
Maaddaama aan ahayn isticmaale farsamo yaqaan lugeynaya, waxa kaliya ee aan ku biirin karo ayaa ah warbixinnada cayayaanka w .waxaa rajo laga qabaa - aan aad u sarreynin - in la xallin doono. Waa waxa nidaamka penguin leeyahay.
st0rmt4il, Waan joogi doonaa ilaa inta taageeradu dhamaanayso laakiin waa caajis, iskama dayin nooca 18.
LOL .. Sidaad adigu tahay ninyahow, rajo ahaan iyo hagaajinta cusub ee F19 oo ka dhig ka rakibayaasha mid lagu raaxeysto .. Inta kale waxaan si fiican u arkaa
Ha naga takoorin qaanso-soo-saarka:]
"Debian ahaan waxaan u helay lambarradan."
Maxaad ka heshay furayaashaas!
Ii sheeg, waa "furayaasha" aad heshay inaad iska diiwaangeliso OS-ga oo buuxa ama inaad nolol aan dhammaad lahayn ku yeelato ciyaarta yar?
Sawirada: FLISOL 2013
[Sidee loo hagaajiyaa] iftiinka laptop-ka ku jira Linux